Horumarinta tiknoolajiyada cusub ee qaybaha gawaarida waxay soo bandhigaysaa isbeddellada waaweyn
Waqtiga dhejinta: 03-22-2021
Qoto dheerida horumarka ayaa sii qoto dheer; heerka guud iyo jaangoynta qaybaha ayaa kordhay; heerka korantada iyo qeybaha caqliga ayaa kordhay; miisaanka fudud ee gawaarida iyo qaybaha ayaa noqdey isbeddel horumarineed mustaqbalka; farsamo nadiif ah oo deegaanka u wanaagsan ...Akhri wax dheeraad ah »
LA SHAQAYNTA SINOTRANS XADDIDAN
Waqtiga dhejinta: 03-11-2020
Sinotrans Limited (oo loo yaqaan "Sinotrans") waa isudhafka ugu weyn ee iskudhafka saadka ee Shiinaha, waana shirkad qaran oo 5A ah oo ka shaqeysa saadka. Shabakadda Sinotrans waxay dabooshaa dhammaan qaybaha Shiinaha iyo shanta qaaradood ee adduunka. Sannadkii 2015, Sinotrans wuxuu noqday ...Akhri wax dheeraad ah »
Kordhinta SUUQA QAYBAHA BASKA
Waxaan u dhoofineynaa badeecooyinkayaga muuqaalka leh ee KING LONG iyo YU TONG Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, iyo Malaysia. Akhri wax dheeraad ah »
NAGU SOO BOOQDAY MACAAMIISHA UGU SOO JEEDA BRAZILIA APRIL 2019
Waxay kuxirantahay qalabka horumarsan iyo kooxda farsamada xirfadleyda ah, waxaan u adeegeynaa macaamiil aad iyo aad u badan oo leh alaabteena tayada ugu fiican, qiimaha tartanka, bixinta waqtiga iyo adeegga wanaagsan. ...Akhri wax dheeraad ah »